Guddoomiyaha Komishinka shataranjiga iskuulada aduunka oo hambalyo soo gaarsiiyay xiriirka Soomaaliyeed ee shataranjiga | Somchess.net
You are here : Somchess.net » News English » Guddoomiyaha Komishinka shataranjiga iskuulada aduunka oo hambalyo soo gaarsiiyay xiriirka Soomaaliyeed ee shataranjiga
Gudoomiyaha komishinka shataranjiga iskuulada aduunka Prof. Uvencio Blanco,ayaa ugu hambalyeeyay xiriirka Soomaaliyeed ee shataranjiga shaqada wanaagsan ee uu ka qabanayo dalka Soomaaliya ee sharci la’aanta ehelka u noqday.
“Aniga oo ah guddoomiyaha komishinka shataranjiga iskuulada aduunka ee hoos yimaada FIDE,waxaan ku faraxsanahay in aan idin kugu hambalyeeyo kusoo daritaanka shataranjiga lagu soo daray manhajkla wax barasho ee iskuulada Soomaaliya”ayuu Prof. Uvencio Blancoin,ku yiri dhambaalka e-mailka ah ee uu soo gaarsiiyay guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee shataranjiga.
”Tani waa talaabada FIDE ay soo dhaweyneyso dhiirina gelineyso”ayuu mar kale yiri guddoomiyaha komishinka shataranjiga iskuulada aduunka Prof. Uvencio Blanco.
Guddoomiyuhu waxaa uu wanaag u rajeeyay dhamaanba Soomaalida gaar ahaana kuwa ku howlan horumarinta dhaq dhaqaaqyada shataranjiga iskuulada Soomaaliya oo dhan.
Dhambaalka hambalyada ah ee ka yimid Prof. Uvencio Blanco,ayaa ku soo beegmay,iyadoo guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee shataranjiga Dr. Ahmed Abdi Hassan “Wataac” iyo maamula yaasha 50 iskuul oo hoose ,dhexe iyo sareba ah ay faham guud iskala qaateen arrinta ku aadan in barashada shataranjiga lagu soo daro manhajka wax barasho ee iskuulada laga bilaabo bartamaha sanadkan.
« Somali Chess Federation President re-elected
Soomaaliya oo manhajka wax barashada iskuulada lagu soo darayo Shataranjiga »